Biko dochie anya nke a ederede na ị Amụma nzuzo. Biko tinye ọ bụla ọzọ kuki gị website na-eji n'okpuru (eg, Google Analytics)
Nke a na iwu nzuzo na-akọwa otú ojiji na-echebe ozi ọ bụla nke ị na-enye mgbe ị na-eji nke a website. -agba mbọ ka n'ịhụ na nzuzo gị na-echebe. Anyị kwesịrị ịjụ gị ka ịnye ụfọdụ ozi site na nke ị nwere ike mata mgbe eji nke a website, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ijide n'aka na ọ ga na-eji dị na nkwupụta nzuzo a. nwere ike ịgbanwe a iwu site n'oge ruo n'oge site emelite na peeji a. Ị kwesịrị ịlele a na peeji nke site n'oge ruo n'oge iji hụ na unu nwere obi ụtọ na ihe ọ bụla mgbanwe.
kpọtụrụ ọmụma gụnyere adreesị ozi-e
ozi igwe mmadụ ndị dị otú ahụ dị ka koodu nzi, mmasị na ọdịmma
ozi ndị ọzọ mkpa ka ndị ahịa nnyocha ndị e mere na / ma ọ na-enye
N'ihi na ike ịgwụcha agwụcha ndepụta nke kuki anyị na-anakọta na-ahụ Ndepụta nke kuki anyị na-anakọta ngalaba.
Anyị na-achọ ozi a iji na-aghọta gị mkpa na-enye gị a mma ọrụ, na karịsịa n'ihi na ndị na-esonụ:
Esịtidem ndekọ idebe.
Anyị nwere ike iji ozi ka mma ngwaahịa na ọrụ anyị.
Anyị nwere ike oge-eziga ozi-e nkwado gbasara ọhụrụ ngwaahịa, pụrụ iche na-enye ma ọ bụ ozi ndị ọzọ nke na anyị chere na ị pụrụ ịdị na-akpali iji adreesị ozi-e nke i nyere.
Site n'oge ruo n'oge, anyị nwekwara ike iji ozi gị iji kpọtụrụ gị maka nyocha ahịa nzube. Anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị site email, ekwentị, faksị ma ọ bụ mail. Anyị nwere ike iji ozi ahụ iji hazie website dị ka gị ọdịmma.
A kuki bụ obere faịlụ nke jụrụ ikike na-etinye na kọmputa gị ike mbanye. Ozugbo ị na-ekweta, faịlụ na kwukwara na kuki enyere nyochaa web okporo ụzọ ma ọ bụ na-ahapụ gị mara mgbe ị gara na a akpan akpan saịtị. Cookies ekwe ka web ngwa iji zaghachi gị dị ka mmadụ. The ngwa weebụ nwere ike ya kwekọọ arụmọrụ gị mkpa, na-enwe mmasị na adịghị amasị ya site na-ekpokọta na-echeta ọmụma banyere na mmasị gị.
Anyị na-eji okporo ụzọ log kuki iji chọpụta peeji nke na--e. Nke a na-enyere anyị nyochaa data banyere web page okporo ụzọ na-adịkwu website iji ịkwa akwa ya ka ndị ahịa mkpa. Anyị na-na-eji ozi a maka mgbakọ na mwepụ analysis nzube na mgbe ahụ data a na-ewepụ si usoro.
N'ozuzu, kuki enyere anyị nye gị a mma website, site enyere anyị aka inyocha nke peeji nke ị na-ahụ bara uru na nke ị na-adịghị. A kuki ọ dịghị ụzọ na-enye anyị ohere gị na kọmputa ma ọ bụ ozi ọ bụla banyere gị, ndị ọzọ karịa nke data ị na-ahọrọ ịkọrọ anyị. Ị nwere ike ịhọrọ ịnabata ma ọ bụ iju kuki. Imirikiti ihe nchọgharị weebụ na-akpaghị aka na-anabata kuki, mana ị nwere ike idezi mwube ihe nchọgharị gị na-ojuju kuki ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ. Nke a nwere ike eme ka unu ghara irite uru site na website.
Unu nwere ike iji machibido ndị collection ma ọ bụ ojiji nke ozi gbasara gị na ndị na-esonụ ụzọ:
mgbe ọ bụla ị na-jụrụ dejupụta a ụdị na weebụ, anya maka igbe na ị nwere ike pịa na-egosi na ị na-achọghị ozi ahụ iji na-eji onye ọ bụla maka kpọmkwem ire ahịa
ma ọ bụrụ na ị na mbụ kwetara anyị na-eji ozi nkeonwe gị maka kpọmkwem ire ahịa, ị nwere ike gbanwee obi gị n'oge ọ bụla site n'idetara ma ọ bụ emailing anyị na sales@armati.biz
Anyị ga-adịghị ere, kesaa ma ọ bụ mgbazinye ozi gbasara gị na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere gị ikike ma ọ bụ na-achọrọ site na iwu ime otú ahụ. Anyị nwere ike iji ozi gbasara gị na iji zitere gị nkwado ọmụma banyere ndị ọzọ nke anyị na-eche i nwere ike ịhụ na-akpali ọ bụrụ na ị na-agwa anyị na-ịchọrọ ị a na eme.
I nwere ike ịrịọ nkọwa nke onye ozi nke anyị jide banyere gị n'okpuru Data Nchedo Act 1998. A obere ego ga-nkwụnye. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka oyiri nke ozi ẹkenịmde on ị biko detara.
Ọ bụrụ na i kweere na ozi ọ bụla anyị na-ejide on ị adabaghị ma ọ bụ ezughị ezu, biko detara ma ọ bụ ozi anyị ozugbo o kwere omume, na n'elu adreesị. Anyị ga n'egbughị oge idozi ozi ọ bụla hụrụ na-adabaghị.
Ndepụta nke kuki anyị na-anakọta
Okpokoro n'okpuru Nsuso na kuki anyị na-anakọta na ihe ọmụma ha na-echekwa.
Otú mụ na gị ahịa ụgbọ.
Echekwa na udi Ama na peeji nke, na-enye ohere iji gosipụta peeji ọsọ ọsọ.
The ihe na i nwere na Tụlee Ngwaahịa ndepụta.
Ị họọrọ currency
Ozi ezoro ezo nke gị ahịa id na ụlọ ahịa.
Egosi ma ọ bụrụ na ị na-ugbu a wee banye n'ime ụlọ ahịa.
Ozi ezoro ezo nke ndị ahịa otu na unu bụ ndị.
Echekwa na ahịa nke ID
A ọkọlọtọ, bụ nke na-egosi ma caching bụ ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ.
Ị sesssion ID na ihe nkesa.
-Enye ohere ọbịa dezie ha iwu.
Ndị nke ikpeazụ ahụ i letara.
The kasị nso-nso ngwaahịa i anya.
-Egosi ma à ọhụrụ ozi ọ dị.
-Egosi ma ọ na-ekwe na-eji cache.
A njikọ na ozi banyere gị cart na ị na-elele ihe mere eme ma ọ bụrụ na ị jụrụ saịtị.
The ID nke ọ bụla ntuli ị na nso nso tozuru oke na.
Ozi na ihe ntuli ị tozuru oke on.
The ihe ndị ị na-na nso nso tụnyere.
Ozi na ngwaahịa i emailed ka enyi.
The ụlọ ahịa echiche ma ọ bụ asụsụ ị họrọ.
-Egosi ma à ahịa ekwe na-eji kuki.
Ngwaahịa na ị na nso nso anya.
Ezoro ezo na ndepụta na ngwaahịa atụkwasịkwara gị Wishlist.
The ọnụ ọgụgụ nke ihe gị Wishlist.